Wariye C/raxmaan Taysiir “Saxaafaddu waxay ka mid tahay fursadaha maanta Soomaaliya lagu badbaadin karo”
SOMALITALK - IBRAHIM DAA'UUD
Wariye C/raxmaan Taysiir “Saxaafaddu waxay ka mid tahay fursadaha maanta Soomaaliya lagu badbaadin karo” - q.2aad
Ibraahim Da'ud Abdalle "Gentleman"
C/raxmaan Taysiir wuxuu ka soo shaqeeyay goobo kala duwan oo warbaahineed oo ay ka mid yihiin, Ayaamaha newspaper, Radio Mogadishu, Somaliweyn Radio and website oo uu wararka uga diri jiray magaalada Nairobi ee dalka Kenya, iyo wargeyska National Post oo uu ilaa haatan la shaqeeyo.
Siminaaradda uu ka qeybgalay:
16kii ilaa 29kii Janaayo 2005, wuxuu C/raxmaan Taysiir ka qeyb-galay siminaar ay BBC World Service Trust, u qabatay Online Journalists (Wariyayaaha Websiteska).
Janaayo 2006 wuxuu Taysiir helay shahaado ay bixisay BBC World Service Trust, kaddib markii uu dhammaystay kooraskii ugu horreeyay ee waxbarasho dhinaca Internetka ah, (I-learn Training course).
February 2006, Taysiir wuxuu ka qeyb galay siminaar loogu talagalay Sawir qaadayaasha, kaasoo BBC World Service Trust, ay ku qabatay magaalada Hargaysa.
10 – 21 Dec 2007, wuxuu ka qeyb galay siminaar ay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ugu qabteen wariyayaasha Soomaaliya ka soo qaxay hay’adaha Article19 Global Campaign for Free Expression iyo United Nations Human Rights.
15kii ilaa 16kii July 2008, wuxuu Taysiir ka mid noqday wariyayaal uu Wargayska National Post siminaar ugu qabtay magaalada Nairobi.
Muxuu xiiseeyaa Taysiir?
C/raxmaan Taysiir wuxuu xiiseeyaa akhriska Qur’aanka Kariimka, marka uu fursadda leeyahay wuxuu kaloo jecel yahay inuu akhriyo buugaagta waaweyn ee sheekooyinka, cilmiga iyo taariikhaha ah, wuxuu sidoo kale xiiseeyaa diyaarinta qoraallada, booqashada websiteyada, daawashada filimaanta taariikhaha iyo dhaqamada laga matalo, daawashada wararka Telefishinada, dhagaysiga wararka iyo barnaamijyada idaacadaha iyo suugaanta, akhriska Wargaysyada iyo waxbarashada.
Waxyaabaha uu aadka u xiiseeyo maadaama ay ka mid tahay suugaanta Soomaalida ayuu isku dayay Taysiir inuu hal-abuuro heeso, wuxuuna sameeyay dhowr iyo toban hees oo jaceyl, waddani iyo wacyigelin isugu jira, inkastoo aan lagu wada luuqeynin heesahaasi, haddana waxaa suuragashay in la qaado 3 hees oo laba ka mid ah ay ku luuqeysay fanaanada weyn ee Khadiijo Fooday Nuur, kuwaasoo kala ah Jaceyl iga facweyn iyo Guurka Qarsoodiga¸heesta kale oo lagu magacaabo Adiyo Caashaq waxaa qaaday Maxamed C/kariim Shire (Moha), taasoo erayadeeda ay ka mid yihiin:
Weli adiyo caashaq
Farxad maku caweyseen?
Casuumaad makuu dhigay
Dhiil cugan makuu furay
Makaa siiyay caanoo
Hoo cab makugu yiri?
Cirka sare dushiisiyo
Maku geeyay caadkoo
Intuu kuu calaacalay
Maku geliyay cuduroo
Wax ha cunin makugu yiri
Cunahana makugu dhegay?
Anuu carrabka iga tolay
Intuu caqliga iga xaday
Igu raray culeysoo
Marna I ciseeyaa
Marna ila colloobaa!
Heesaha kale wuxuu ii sheegay in dhawaan lagu luuqeyn doono oo qorshahooda uu socdo sida laxan u sameyntooda, mar aan weydiiyay waxa ku dhaliyay inuu heeso sameeyo, wuxuu yiri “Habeen bay igu soo dhacday inaan tijaabiyo hal-abuurkeyga, waxaana markaas ku guuleystay inaan sameeyo hees aan ugu magacdaray jaceyl iga facweyn oo ahayd heesteydii ugu horreysay, taasoo horseeday su’aalo igu soo shubmay oo iiga yimid asxaabteyda haba ugu badnaadeene kuwa saxaafadda”.
Taysiir mar haddii uu qaaday tallaabadiisii ugu horeysay ee uu fanka ku galay tijaababa ha ahaatee, maxaa dhaliyay inuu heeso kale ku sii dhiirado sameyntooda?, “Waxaa igu dhiirrigeliyay Khadiijo Fooday oo markii aan u geeyay heestaasi ii sheegtay in erayada ku jira ay yihiin kuwo si cajiib ah u sameysan, waxayna igu baraarujisay inaan ahay nin mustaqbal u leh inuu wax badan hal-abuuro, sidaas daraadeed ayaan u sameeyay heeso kale, waxaa kaloo jira asxaab iga codsatay qisooyin ku dhacay inaan wax ka sameeyo”.
Soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan, “hadda waqtiga lagu jiro maxay kula tahay in dhibaatada Soomaalida ay xal u noqon karto?” ayaan weydiiyay C/raxmaan Taysiir, wuxuuna yiri “Waxaa xal noqon kara in si daacadnimo ah ay dadka Soomaaliyeed isku walaashadaan oo ay meesha ka saaraan cuqdadii kala gashay, ayna ka fikiraan sidii ay u dhisi lahaayeen mustaqbalka ubadkooda”.
Taysiir oo dhinacyada ay ka taaganyihiin Abshir bacadle iyo Goobdoon marka uu saxaada dhameeyay
Taysiir oo waraysana Nuuradiin xilligii doorashada Punland
C/raxmaan Taysiir wuxuu aaminsan yahay in saxaafaddu ay qeyb ka qaadan karto xal u raadinta dhibaatada hadda taagan iyo arrimaha nabadda iyo dib u heshiisiinta, “Saxaafaddu waxay ka mid tahay fursadaha maanta Soomaaliya lagu badbaadin karo” ayuu ku soo gunaanaday hadalkiisa.
Intaas ayaanu ku soo gabagabeeynayaa waraysigii aan Wariye C/raxmaan Taysiir oo aan ku wada kulanay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Sababta keentay in aan waraysigan la yeesho waxay aheyd iyadoo uu ka mid yahay wariyaasha ugu da’da yar ayaa haddana wuxuu ka mid yahay kuwa ugu sii dadaalka badan mihnadda.
Akhri qaybtii 1aad
Cali Geedi Ceeb kama xishooda miyaa.! "Waxaad Barataa waa baaskaa" Akhri...
Anniga iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed.!.. AKhri..
Xeradda Qaxootiga ee Kakuma iyo waxyaabihii iigu yaabka badnaa ee aan ku soo arkay.!
Arrimaha Amaanka ee xeradda Qaxootiga ee Kakuma.!
Magaaladda Mombasa iyo Xasuusta Somalia.!